अस्पतालकाे स्याहारले काेराेना जितेकी ७ वर्षीया बालिका : चाेकाेफन खाएँ, चित्रहरु बनाएँ – Health Post Nepal
अस्पतालकाे स्याहारले काेराेना जितेकी ७ वर्षीया बालिका : चाेकाेफन खाएँ, चित्रहरु बनाएँ
२०७७ जेठ ११ गते १४:४३
वैशाख १९ देखि २१ दिनसम्म शोकमग्न रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरको वडा नम्बर–८ जोलाहनपुरमा शुक्रबार छुट्टै रोनक थियो।
स्थानीय सबै खुसी देखिन्थे। सबैको अनुहारमा खुसी र जितका साथै वर्षौंदेखि टाढा रहेको आफन्तको बिछोडपछि भएको मिलनमा हुने हर्षको जस्तै मनोभाव झल्किरहेको थियो।
कारण थियो २१ दिनपछि कोरोना भाइरससँगको लडाइँ जितेर आफ्नै टोलका २१ जना अस्पतालबाट घर आगमनको क्षण। कोरोना संक्रमणको उपचारपछि पूरा टोलमा पर्वकाे माहोलझै अन्सारी टोलमा रौनक थियो। उता सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा त्योभन्दा कम रौनक थिएन।
उपमहानगरपालिकाका उपमेयर थापासहित भेरी अञ्चल अस्पतालका मेसु प्रकाशबहादुर थापा, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र दर्जनौं सञ्चारकर्मीसमेत कोरोना जितेका २१ जनाको डिस्चार्जपछि स्वागत गर्न अस्पतालको गेट पुगेका थिए।
कोरोनालाई जितेर नेगेटिभको प्रमाणपत्र लिएका सबैलाई फुलमालासहित स्वागत गरियो।
२१ कोरोना पोजेटिभ पाइएका उपचारपछि बिदाइ हुने बेला सबैभन्दा मुख्य आकर्षणको केन्द्र ७ वर्षीया बालिका बनेकी थिइन्। हुन त अस्पतालमा १ वर्ष, ७ वर्ष र ९ वर्षका गरी ३ बालबालिका रहे पनि ७ वर्षीया ती बालिका जब कोरोना जितेको प्रमाणपत्र र हातमा स्वास्थ्यकर्मीले दिएको फूलको गुच्छा लिएर मुस्कुराउँदै बाहिर निस्किइन् सबैजना भावविह्वल भए।
बाँकेमा पहिलो संक्रमितसहित उनका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट फेला परेका थप २० जना निको भएका हुन्। उनीहरुलाई फुल र खादा ओढाएर अस्पतालबाट बिदाइ गरिएको थियो।
कोरोना निको भएकाको बिदाइको दृश्य कैद गर्न बाँकेका थुप्रै सञ्चारकर्मी अस्पताल पुगेका थिए। कोरोना निको भए पनि उनीहरू घरमै थप एक साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
ती बालिकाको अभिभावकले अस्पतालको २१ दिनको बसाइ एकदम सुखद रहेको बताए। खजुरा क्यान्सर अस्पतालको राम्रो हेरचाह र व्यवस्थापनका कारण यति छिटै कोरोनासँगको लडाइँ जित्न सफल भएकोमा खुसी हुँदै उनले अस्पताल र सम्बद्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। ३७ वर्षीय उनले सुरुमा अस्पतालमा आँउदा अप्ठ्यारो भए पनि विस्तारै बसाइ सहज भएको सुनाए।
अस्पतालमा एउटा ठूलो हलमा मेरो र छोरीसहित थप बिरामीको बेड रहेको जनाउँदै उनले सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी रहेको बताए। उनले घरजस्तै सबै सेवासुविधा व्यवस्थापन पक्षले उपलब्ध गराएको सुनाए।
छोरीलाई खानासँगै फलफुल, चकलेट, दूध, चोकोपन, बिस्कुट सबै अस्पताल व्यवस्थापनले उपलब्ध गराएकामा उनी दंग थिए।
खानेकुरासँगै अस्पताल व्यवस्थापनले बालबालिकाका लागि डाइपर, विभिन्न किसिमको खेलौना, कपीकलम, पेन्सिल तथा चित्र कोर्नका लागि ड्रइङ बुकसमेत उपलब्ध गरेको उनले जानकारी गराए।
‘अस्पतालले यति राम्रो सुविधा उपलब्ध गरायो कि हाम्रो २१ दिन कसरी बित्यो थाहै भएन,’ ७ वर्षीया बालिकाको पिताले थपे, ‘छोरी सधैं खेलौना र कपीकिताबमै व्यस्त हुन्थी, एकचोटि मात्रै ईद कहिले छ, हामी घर जाने ईद मनाउने कि नाइँ भनेर सोधेकी थिइ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापनको सहयोगले आफूहरूको मनोबल बढाउन सहयोग मिल्यो। उहाँहरूले हामीलाई सधैं सम्झाउनुहुन्थ्यो। नआत्तिन सुझाव दिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उच्च मनोबलसाथ २१ दिन अस्पतालमा बसेर कोरोना जित्न सफल भयौं।
संक्रमितहरू निको भएपछि कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्साही भएको कोरोना विशेष अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ‘हामीले बालबालिकासहित सबैलाई उचित प्रबन्ध गरेका थियौं र बालबालिकाका कारण कुनै कतै समस्या भएन।’
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा रहेका २१ जना कोरोना पोजेटिभ निको भएपछि शुक्रबार घर फर्किएका हुन्। उनीहरूलाई कोरोना विशेष अस्पतालका व्यवस्थापन टिम, जनप्रतिनिधिले शुभकामना दिएर बिदा गरेका थिए। निको भए पनि उनीहरूलाई घरमै थप एक साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिइएको थियो।
२१ जना घर फर्किएको विषयलाई लिएर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना भाइरस जित्नेको बिदाइ उत्सवजस्तै रोमाञ्चक बनेको जनाएका छन्। कोरोना विशेष अस्पताल खजुरामा संक्रमितको उपचारपछिको बिदाइ दृश्यले त्यस्तै अनुभूति भएको मन्त्री पोखरेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्। मुख्यमन्त्रीले अस्पताल व्यवस्थापन परिवारलार्ई धन्यवाद र बधाई दिँदै उपचारमा सलग्न चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र सबै सहयोगी हातलाई, कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा उच्च मनोबल बनाएर भाइरस जित्न सफल सबै वीरहरूप्रति सम्बोधन गरेका छन्।
खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले पनि खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा निर्मित कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालबाट बाँकेमा पहिलोपल्ट संक्रमित व्यक्तिसहित २१ जनालाई निको भएर फूलमालासहित बिदाइ गर्न पाउनुलाई सकारात्मक सन्देश भनेका छन्। ‘सलाम छ तपाई स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापकीय टिमलगायत कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा एकताकासाथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैलाई सम्झन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्।
उनले सञ्चारकर्मी, खजुरेली जनता, खजुरा क्यान्सर अस्पतालका निर्देशकलगायत अहोरात्र खटिएका कर्मचारी सबैलाई सलाम भन्दै सबैले गौरवबोध गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालगन्जमा पहिलोपल्ट वैशाख १९ मा ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको आधारमा स्वाब परीक्षण गर्दा वैशाख २३ मा एकैसाथ २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको भयो।
वैशाख २६ र ३१ मा कोरोना पुष्टि भएका चारजना आइसोलेसनमै छन्। दुई जनाको दोस्रो परीक्षण पनि पोजेटिभ देखिएकाले आइसोलेसनमै रहेको भेरी अस्पताल निमित्त मेसु डा. थापाले बताए।
उनीहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिने उनले बताए। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको डा. थापाले बताए। ‘उहाँहरूलाई १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा रहन सुझाव दिएका छौं।’
हालसम्म बाँकेमा १ सय ४२ जनामा कोरोना देखिएको छ। तीमध्येमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। १ सय १४ जनालाई विभिन्न आइसोलेसन अस्पताल र सेन्टरमा राखिएको छ भने शनिबार नै नरैनापुरमा पोजेटिभ पुष्टि भएका २७ जनालाई आइसोलेसनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।